Poems on February 23, Pope iyo ku saabsan Pope laga bilaabo wiilkiisa iyo gabadhiisa - Gabay ah oo gaaban gabayo awoowe oo ka weyn awoowe iyo gabadha
Kuwa kale Fasaxyada Febraayo 23
Poems for February 23, Pope iyo ku saabsan Pope laga bilaabo gabadhiisa iyo wiilkiisa - gabayo gabal u ah Maalinta Waalidiinta Difaaca ee ka soo weyn oo awow u ahaa iyo gabadh
Qiyaastii qarnigii hadda, 23-kii Febraayo, Ruushku waxay u dabaaldegaan fasax cajiib ah, u hambalyaynaya ragga. Magaca dhabta ah ee dabaaldegga waa Maalinta Waalidiinta Maalinta, laakiin ka hor intaan loo yeerin Ciidda Ciidanka, tan iyo taariikhdani waxay ku timid wakhtigii loo qabtay guulihii ugu wanaagsanaa ee Ciidankii Laanqayrta Cas ee 1919kii. Ruushka casriga ah waxay siiyaan macno dheeraad ah, calaamada fasaxa qaboobaha sida Maalinta Ragga. Gabdhaha iyo wiilashu waxay siiyaan gabay gabal ah 23-kii Febraayo ee baadari. Ragga qaaliga ah waxaa lagu soo bandhigaa hadiyado asal ah, akhri gabayo gaaban, daboolaan miiska xafladaha. Dabcan, guryaha oo dhan waxay diyaariyaan talooyinkooda u gaarka ah madaxa qoyska - gabayada uu ka kooban yahay ama xitaa gabay. Munaasabadda miiska waxay akhriyaan gabayo loogu talagalay February 23 awoowe - kibirka dhammaan xubnaha qoyska. Maanta waxaannu kuugu soo bandhigaynaa si aan u doorto hambalyo farxad leh aabahaaga ama awoowe - doorashadayada waxaad ka heli doontaa gabayada dhadhan kasta.
Gabay qurux badan oo loogu talagalay Febraayo 23, baadari ka timid gabadhiisa - Qosolka madaxa qoyska ee Defender ee Maalinta Wanaajinta ee 2017 waxay yiraahdaan in tufaaxu ay gabdhahooda u jecel yihiin in ka badan wiilashooda. Malaha, tani maahan hadal sax ah - aabbuhu waa inuu sii walaacsan yahay, ka welwelaa taabashada, gabdhaha gabi ahaanba difaacaya; Wiilashu waxay isku dayaan inay u diyaargaroobaan dhibaatooyinka nolosha ee da 'yar. In la arko waayo-aragnimooyinka ay ka soo jeedaan, dadka ay jecel yihiin iyo naxariista ay u qabaan, gabdhuhu aad bay ugu xiran yihiin aabayaasha - difaacayaasha hooyada, carruurta iyo qoyska. Dabcan, Febraayo 23, gabdhuhu waxay si farxad leh u siiyaan gabayadooda gabayadooda quruxda badan. Khadkoodu waxay tilmaamayaan "geesinimada", "geesinimo" dhabta ah - aabahood. Mararka qaarkood stanzas gabadhu waxay isku qoraan oo ay soo bandhigaan waxqabadkooda sida ugu farxada badan ee baadari. Waxaan leenahay maalin qabow Febraayo Holiday ma badin doonaa, Sugitaanka maanta, Aabaha Aad aad u delicious! Diyaargarow, dabcan, Qoyska fasaxa, Oo waan kuu qori doonaa, waxaan isku dayayaa, Hambalyo iyo aniga! Saddex iyo labaatanka bisha Febraayo ... Daddy balan waa tan, Ha sii dheeraato, wuxuu siinayaa iftiin badan!
Yaa faras ku leh farqiga maanta? Oo yaa dab ku gubi doona, oo aan biyo ku dhalaalin? Yaa qoyska oo idil ku faanaa? Geesigii dadkeena! Febraayo saddex iyo labaatanaad ayaa u dabaaldega aabahay. Noqo mid degan Russia. Aabe sababo wanaagsan ayaan ku amaanayaa. Anigu kama baqayo qof, waxaan jeclahay qareenka.
Maalinta cas ee jadwalka, Saaxiibka ragga! Qof kastaa wuxuu soconayaa bisha Febraayo, inkastoo darajada. Aniga ah, aabahayga ayaa mas'uul ka ah! Inta ugu sarreysa! Waxa uu yahay difaac qoys fiican, farxad ayaa siinaya, qosol. Adiga, xaasid qaali ah, waan qaadan doonaa fasaxa. Aad ayaan u faraxsanahay inaad tahay aniga! Anigu waan ku jeclahay!
Sincere gabayada Febraayo 23, 2017 aabaha wiilkiisa - Gumeysiga wuxuu ka shaqeeyaa ragga dhabta ah
Haddii baadari ah oo geesinimo iyo geesinimo leh, uu ogyahay sida loo ilaaliyo qoyskiisa oo uu u istaago sharafta reerka, noloshiisu waxay noqotaa tusaale dhab ah wiilasha. Qoysaska xooggan, oo aabuhu u keeno wiilasha wiilkiisa, wiilalku waxay ku koraan kalsoonidooda, si naxariis leh, marwalba diyaar u ah inay caawiyaan hooyadooda, gabdhaha, walaalaha, xitaa shisheeyaha. Dareen farxad leh aabihiis, wiil kasta oo jecel wuxuu siinayaa hadyad Pope on February 23, akhriya aayaadka ku saabsan ciidanka, oo ku saabsan camalka ragga sida kuwa badanaa aabaha sameeyay. February 24-keedii, aabahay, hambalyo! Kaliya sida ugu fiican ee aad, Waxaan ka jeclahay qalbiga! Noocyo badan, maalmo diiran, Farxad wacan, Si aad u nasiib badan aad mar iyo wax cajiib ah! Si aad u noqoto mid caafimaad qabta, ha ahaato inaad jiran tahay, oo aanad murugeysanayn, Kaliya saaxiibada ugu fiican Fasaxyada si aad ula kulanto! Hiwaayadaha waa mid xiiso leh, cusub, cajiib ah iyo madaxyada wanaagsan, haqab-beelid, fikrado!
Adiga - nin runtii ah, Ka hor inta fiiriya, Nooca ugu fiican, caddaalad ah, Si aad u yaraanta bukaanka! Laga soo bilaabo Febraayo 23, Dad! Ha ilaashadee quduusiinta oo dhan Cidhiidhiga maanta iyo sanadka oo dhan! Hooyo had iyo jeer taageero, caawi si dhakhso ah oo si sahlan, Ha ka xanaaqin rikoodhada, ku faraxsanahay nasiib u yeeshay cadawga!
Aabaha uu jecel yahay, aabihiisna wuxuu leeyahay, My dhow, midka kaliya, Qalbigaygu! Maya, waxaad jeceshahay, iyo jacaylka jirin, Beddelka awood u leedahay Waxaad i siisaa dunida oo dhan! Dunida oo dhan, Xataa dunida oo dhan, Saaxiibkay iyo mentor, Qaraabo, sanam! Maalinta Febraayo Tani waxay la socotaa lambarka 23 Mar labaad daaqada daaqadda, aabahay, fiiri!
Gabagabo gaban oo ku saabsan Pope on February 23 - Bannaanka carruurta ee wiilasha 7 sano ilaa Maalinta Diidmada of Waddanka
Sida lagu heeso heeso caan ah, "Papa waxbaa samayn kara". Wiilasha yaryar, carruurta 6-7 jir ah ayaa hubaal ah in aabuhu yahay halyeey dhab ah; dagaalyahan daacad ah oo geesinimo leh, nin aan aqoonin cabsi. Gabayada carruurta ee ku saabsan codka baadariga yar wax yar, laakiin waxay si sax ah u qoran yihiin sida ilmo todoba jir ah uu u malaynayo naftiisa. Da'daan, carruurtu waxay bilaabaan inay kobciyaan aabayaashood, wax walba oo ay sameeyaan "sida aabe." Dabcan, wiilku wuxuu dooni doonaa inuu u hambalyeeyo aabihiis - tusaalaha dhabta ah ee naga mid ah - annaga ragga. Ka caawi inuu doorto oo uu barto aayadda Pope - tusaalooyinka muruqyada waxaad ka heli doontaa boggan. Aabahayga ayaa ah kan ugu fiican dunida! Sidaa darteed waxaan dhihi, ma ahan aabahay aabahayga, waxaan kaliya u diyaarsanaa khadadkaas, Tom oo ah halyeeyga qoyskeyga! Anigu waan kuu sheegi doonaa, ha ku buuqin jaceyl, adiguna waxaan ku noolahay waqtiyada ugu wanaagsan! Iyo maalinta ragga, Febraayo 23, Waxaad uqalmaasho badan oo ka mid ah astaamaha!
Saddex iyo labaatanaad ee bisha February waa maalinta ugu fiican ee taariikhda. Daahirnimada iyo sharafka, fasax wanaagsan oo wacan! Waxaan martiqaadnaa martida oo dhan, Maalinta difaacana waa la soo dhaweynayaa! Dadku sidoo kale waxay u adeegeen, Fasaxan ayaa u qalmey. Nahay waa difaackeena. Aan sheegin wax qiimo leh. Febraayo 23: Dhammaan dhulka oo dhan ha reyreeyo!
Frost clamped dhulka, Daaqada a panorama cawl. Laakiin, kowdeeda saddexaad ee February, hooyadeennu waxay noqotay gabadheena. Maanta waa maalin laga bilaabo aroortii of this - difaaca ah ee dalkayga, Yaa siin doonaa iyada iyada nabad, isagu ma naftiisa u nafis. Anagu kuma faanno oo kaliya - Daafaha qoyska sidoo kale waa ilaaliye. Qof walba waa la jebin doonaa cadowga ilaa iyo inta aabaheennu nala joogaan!
Gabayo gabal 23-kii Febraayo ee awoowe u ahaa - Hambalyo awoowgiisa Maalinta Dhawrista ee Waddanka
Yaa reerka ka soo jeeda sida aabbe xoog leh oo xoog leh? Taasi waa sax - Awoowe! Sidaa darteed, wuxuu u hambalyaynayaa aabihiis 23-kii Febraayo, iyada oo aan jirin wax aan ilaawin aabihiis - awoowe. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah awoowayaashii hadda aan ka shaqeynin ciidamada, laakiin sidoo kale waxay soo mareen dagaal - Chechnya, Afghanistan, waqooyiga Caucasus. Dabcan, ilmaha ay awoowayaashu ka yaqaanaan tan. Waalidiintu waxay ka caawin karaan inay bartaan Xeerka Maalinta Waalidka ee ku saabsan rag geesinimo leh oo u dhiibo awoowe. U ogolow bikradda, u hambalyaynaya awowgeeda ay jeceshahay aayadda, waxay sheegaysaa sida sharaf leh isaga ka mid ah, sida ay u jeceshahay iyo uga mahad celinayso. Waxaan u hambalyeynayaa awoowe aan jeclahay On saddexaad ee saddexda bisha February! Waxaan jeclaan lahaa farxad iyo caafimaad, Oo aad baan ugu faraxsanahay inaad igu haysato!
Ku saabsan dabka dagaal, Ku saabsan guulaha guulaha badanaa badanaa waxaan ka maqlay awoowe. Oo maanta, saacaddan, Waayo, tan iyo intii dhan oo dhan annagu waannu mahad naqaynaa. Awoowe! Waan ku jeclahay!
Waxaan rabaa in aan u hambalyeeyo awoowe 24-kii Febraayo! Qoyska oo dhan waa ku faraxsan yihiin - Waan kufadhiisanayaa, gaar ahaan, waan ahay. Waxaad caqli gal tahay inaad marwalba talo siisid - Ka xishood badan awoowaha adduunka. Waxaan rabaa in aan jeclaado caafimaadka, Ma garan karo guul darrada!
Gabayo xiiso leh fasaxa 23-ka Febraayo, 2017 awoowe oo ka yimid awoowe - Boostooyinka leh rabitaan caafimaad iyo farxad uu awoowe ku leeyahay Maalinta Dhalashada
Haddii aad horey u haysatid hadiyadaha loogu talagalay Febraayo 23, awoowe waa diyaar; Gabadh u dhalatay inuu la soo baxo aayad gaaban oo shaqadiisa u gaar ah, waa waqtigii la fadhiistay oo qori lahaa khadadka gabayada ku qoran kubada cagta ee ku habboon Maalinta Dardar ee Waddanka. Haddii aad jeceshahay awowgayaga caafimaad, wakhti dheer iyo niyad wanaag wuxuu noqon karaa mid hadal iyo ereyo ah - stanzas leh tusaalooyin ku saabsan hambalyo duco ah oo ka imanaya bikradda aad ka heli doonto goobta.
Waxaan u hambalyeynayaa awoowe, Saddexdiiba saddexdii Febraayo, waxaan idiin rajeynayaa farxad, nabad, naxariis iyo naxariis badan. Nasiib ha keeno, Hadafkan macaan, Halkan, Aniga, adiguba waad taqaanaa, Ogow inaadan kali aheyn.
Aabe, maanta waa maalin adag! Qiimo weyn, muhiim ah, jacayl! Saaxiibada, deriska, martida ayaa cabaya! Wax walba waa la shaabadeeyey adiga! Maalintan difaacida nolosha, adigoo u aqoonsanaya inuu yahay geesinimo, waxaad sii wadeysaa inaad garaacdo diiwaanka. "Dulqaad" iyo dhadhanka dagaalka!
Maanta, waxaan u hambalyeynayaa awoowe 23-dii February, waxaanan ka rajeynayaa in aan ku noolaado, si daacad ah u jecel, Qoyskaaga, qaraabadaada iyo asxaabtaada, Weligaa ha iska bixinin, Iyo malaayiin hoose oo qaanso ah Dadaalka oo dhan! Wax yar ka hor Maalinta Dembiga ee Waddanka, bilow raadinta internetka iyo buugaagta gabayada qorayaasha casriga ah. Gabdhahan 23-kii Febraayo, baadari waxay siin kartaa wiil ama gabadh, waxay horay u qori karaan warqad kufilasho oo sharaf leh Maalinta Ragga. Dabcan, fasax, gabayo gaaban Febraayo 23, awoowe akhri iyo dhaleen, oo ku faani jiray gabdhaha aabbihiis aabihiis. Wax kasta oo aad dooratid la yaab leh ragga ugu dhow ee Ciidanka Ciidanka, waxa ugu muhiimsan waa in laga dhigo wadnaha iyo wadnahaaga oo dhan.
Farshaxan madadaalo ah Febraayo 23 iyaga oo gacmahooda u leh aabahood - laga soo bilaabo warqad, sanduuqyo, kartoon - dugsi, koox-yar yar iyo koox sare ee kindergarten - Fasallo mihnadeed oo leh tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay samaynta farshaxanada Febraayo 23
Rajo xiiso leh 23-ka Febraayo, asxaabta ragga - Hambalyo gaaban oo loogu tala galay ardayda iskuulka ee sms, aayadda iyo qiyaasta erayadooda
Cabirka Febraayo 23-naad wiilasha gabdhaha ee xanaanada iyo dugsiga. Muuqaal jilicsan oo isboorti ah 23-kii Febraayo ee loogu talagalay saaxiibada
Sidee u hambalyeeyaa jaaliyadaha Febraayo 23: gabayo, hambalyo, waxa la siinayo
Gabayada 23-ka Febraayo ee jaaliyadaha ku shaqeeya iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga - Hambalyo gaaban ragga ragga ee shaqeeya ee difaaca Maalinta Wanaajinta
Muuqaalka Febraayo 23-aad ee dugsiga: ciyaaraha, tartamada wiilasha, hambalyo quruxbadan
Jacaylka buug ee arooska
Hadiyad aan caadi ahayn March 8
Sidee loo xafidaa dharka nalka lagu xiro?
Muuqaal wajiga ah oo wejiga ka horeysa da'da
Sida loo dabaaldego Sannadka Cusub
Naas-nuujin, ama galoofyada arooska lagu doorto
Dharka dharka arooska tooska ah: xajmiga ujeedka
Bambo geedka yaanyo
Sidee lumineysaa 5 kilo / toddobaadkii: 3 cunnooyinka ugu waxtarka badan!
Jawaabaha xeeldheer su'aalaha nacasta ah
Iyadoo waxa la xirto goos goos goos goos ah: 9 sawirada ugu quruxda badan
Qalabka qurxinta carruurta ee dabiiciga ah
Dib-u-furaha midabka timaha ka dib midabaynta
Dharka dharka arooska qaboobaha
Qaadashada Spain: jasiiradda Mediterranean ee Mallorca
Sidee ka dib 50 sanadood ka fiicnaan 30 sano: 4 sheekooyin cajiib ah
Cucumber ayaa saafi ah